Homeस्वास्थ्यराति राम्रो निद्रा लाग्दैन ? यी हुन् कारण !
अनि कोठाको तापक्रम मिलेको छैन भने पनि निद्रा बिग्रन्छ । पूर्ण निद्राको लागि आरामदायी वातावरण आवश्यक हुन्छ । कोठा तातो छ भने शरीरको तापक्रम बढ्छ र सुत्न गाह्रो पार्छ। अनि एकदम चिसो कोठा छ भने पनि सुत्न सकिँदैन । त्यसैले गहिरो निद्राको लागि सुत्ने कोठाको तापक्रम सामान्य हुनुपर्छ ।
त्यसैले राति राम्रो सुत्न चाहनुहुन्छ भने माथि बताइएका कुरामा विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।एजेन्सी